Shabaab oo weerar culus ku qaaday xabsiga Boosaaso, sheegtay inay daayeen 400 - Caasimada Online
Home Warar Shabaab oo weerar culus ku qaaday xabsiga Boosaaso, sheegtay inay daayeen 400
Shabaab oo weerar culus ku qaaday xabsiga Boosaaso, sheegtay inay daayeen 400
Boosaaso (Caasimada Online) – Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo iyo weerar culus oo xalay lagu qaaday xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Weerarka oo ay fuliyeen dagaal-yahanada Al-Shabaab ayaa ku bilowday qaraxyo lala beegsaday albaabka laga galo xabsiga, waxaana intaasi ka dib dagaal toos ah uu dhexmaray ciidanka ilaalada xabsiga iyo sidoo kale kooxdii weerarka soo qaaday.
Dhinaca kale, war kasoo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in “howlgal guuleystay” uu ka dhacay xabsiga islamarkaana ay kusoo daayeen dad ka badan 400 oo qof, sida ay sheegeen. Dadka lasoo daayey ayay Al-Shabaab ku sheegeen inay ku jiraan xubno ayaga ka tirsan.
Waxay sidoo kale sheegeen in dadka lagasii daayay xabsiga Boosaaso ay ku jiraan “dad shacab ah kuwaas oo si gardarra ah ugu xirnaa xabsiga.”